Tag: email platform
Inbox နှုန်းထားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် Deliverability တိုင်းတာခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2016 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
အကယ်၍ စာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်သူတို့စက်ရုံတွင်အမှိုက်ပုံးများရှိနေပြီး၊ အမှိုက်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုသူတို့တွေ့သောအခါတိုင်းအမှိုက်ထဲသို့ပစ်ချလိုက်လျှင်၎င်းကိုသင်ဖုန်းခေါ်မည်လား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ! သို့သော်ထူးဆန်းသည်မှာအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်၌ spam ဖိုင်တွဲသို့ပို့သည့်မည်သည့်အီးမေးကိုမဆိုပို့ပေးသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရနိုင်မှုရမှတ်များကိုဂုဏ်ယူစရာအလားတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်
Ongage: သင့် UI ကိုပြောင်းခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲခြင်းအီးမေးလ်ရောင်းချသူ!
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 15, 2013 သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 15, 2013 Douglas Karr
ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာအဖြစ်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေတုန်းမှာကျွန်တော့်ကိုထူးဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်တွေရစေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ API တွင်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်သော developer အနည်းငယ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ user interface တွင်အလုပ်လုပ်သောဒါဇင်များစွာရှိသည်။ အဆိုပါ user interface ကိုကုဒ်၏လိုင်းများသန်းပေါင်းများစွာခဲ့တနေ့လုံးအလုပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစာသင်ခုံထားရှိမည်။ ပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ API ကို